အောင်လအန်ဆန်း နိုင်ရင် ခိုင်းချင် တာခိုင်း လုပ်ပေးမယ်လို့ ဆိုတဲ့ ကတိအတိုင်း လုပ်ပေး လိုက်တဲ့ “မော်ဒယ်ဖူးပွင့်ခိုင်” – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အောင်လအန်ဆန်း နိုင်ရင် ခိုင်းချင် တာခိုင်း လုပ်ပေးမယ်လို့ ဆိုတဲ့ ကတိအတိုင်း လုပ်ပေး လိုက်တဲ့ “မော်ဒယ်ဖူးပွင့်ခိုင်”
အောင်လအန်ဆန်း နိုင်ရင် ခိုင်းချင် တာခိုင်း လုပ်ပေးမယ်လို့ ဆိုတဲ့ ကတိအတိုင်း လုပ်ပေး လိုက်တဲ့ “မော်ဒယ်ဖူးပွင့်ခိုင်”
ပရိသတ်ကြီးရေ…. ပုရိသတွေ ရဲ့ အသည်းစွဲ မော်ဒယ်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဖူးပွင်ခိုင်ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံး လေးနဲ့ ခန္ဓာကို ယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေကပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ထူးခြားမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဆက်ဆီ ကျကျအမိုက် စားပုံလေးတွေဟာ ဆိုရင်လ ည်း ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေပန်းစား လူကြိုက်များတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။
သူမကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်ပြီး ပရိသတ်ချစ်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်း ဆုံး ကြိုးစားနေတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဖက်ရှင်လေးတွေပဲ ဝတ်ဝတ်တစ်နေ့တစ်ခြားပိုပြီး ထူးခြားလှပလာတဲ့ ဖူးပွင့်ခိုင်က ပုရိ သတွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို အပြည့် အဝ ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းလေ းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာကြောင့် မိန်း ကလေး ပရိသတ်အများစု အားကျချစ်ခင်နေကြတာလ ည်းဖြစ်ပါ တယ်။
ဖူးပွင့်ခိုင်က အောင်လအန်ဆန်းပွဲ မစခင်မှာ အောင်လနိုင်ရင်ခိိုင်းချင်တာ ခိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ကတိတစ်ခုပေး လာခဲ့ တာပဲဖြဟ်ပါတယ် ။ပွဲအပြီးမှာတော့ အောင်လနိုင်သွားတဲ့အတွက် သူ့ကတိအတိုင်းလုပ်ပေးရတော့မယ့်အကြောက်းကို ‘မနေ့ကပြောထားတဲ့ ဆန္ဒလေးတစ်ဝက် ကိုတော့ အခုဖြည့်စည်းပေး လိုက်ပါပြီနော်ဆန် / ကြက်ဥ / ငါးသေတ္တာ /တမျိုးစီကို 100ကျပ် ဖြစ်ကြိုက်တာယူနိင်ပါတယ် M ask တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးHandgel တစ်ယောက်ကိုတစ်ဗူးကFree ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖူး နဲ့အတူကုသိုလ်ယူနော်မူဆယ်ဆိုပြီး “သူရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှာ ပုံလေးတွေတင်ပြီ သူမရဲ့ ကတိတစ်ဝက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ…. ပုရိသေတြ ရဲ႕ အသည္းစြဲ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဖူးပြင္ခိုင္ကို သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။ သူမရဲ႕ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့အၿပဳံး ေလးနဲ႔ ခႏၶာကို ယ္ေကာက္ေၾကာင္းအလွေတြကပုရိသေတြကို ဆြဲေဆာင္ေနတဲ့ထူးျခားမႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။သူမရဲ႕ဆက္ဆီ က်က်အမိုက္ စားပုံေလးေတြဟာ ဆိုရင္လ ည္း ေဖ့ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားတာ လည္းေတြ႕ရပါတယ္။
သူမကေတာ့ အႏုပညာ အလုပ္ေတြကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္ၿပီး ပရိသတ္ခ်စ္တဲ့ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးျဖစ္ေအာင္ အေကာင္း ဆုံး ႀကိဳးစားေနတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဘယ္လိုဖက္ရွင္ေလးေတြပဲ ဝတ္ဝတ္တစ္ေန႔တစ္ျခားပိုၿပီး ထူးျခားလွပလာတဲ့ ဖူးပြင့္ခိုင္က ပုရိ သေတြရဲ႕အားေပးဝန္းရံမႈကို အျပည့္ အဝ ရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အမိုက္စားေကာက္ေၾကာင္းေလ းကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာေၾကာင့္ မိန္း ကေလး ပရိသတ္အမ်ားစု အားက်ခ်စ္ခင္ေနၾကတာလ ည္းျဖစ္ပါ တယ္။
ဖူးပြင့္ခိုင္က ေအာင္လအန္ဆန္းပြဲ မစခင္မွာ ေအာင္လႏိုင္ရင္ခိိုင္းခ်င္တာ ခိုင္းလုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ပရိတ္သတ္ေတြကို ကတိတစ္ခုေပး လာခဲ့ တာပဲျဖဟ္ပါတယ္ ။ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ ေအာင္လႏိုင္သြားတဲ့အတြက္ သူ႔ကတိအတိုင္းလုပ္ေပးရေတာ့မယ့္အေၾကာက္းကို ‘မေန႔ကေျပာထားတဲ့ ဆႏၵေလးတစ္ဝက္ ကိုေတာ့ အခုျဖည့္စည္းေပး လိုက္ပါၿပီေနာ္ဆန္ / ၾကက္ဥ / ငါးေသတၱာ /တမ်ိဳးစီကို 100က်ပ္ ျဖစ္ႀကိဳက္တာယူနိင္ပါတယ္ M ask တစ္ေယာက္ကိုတစ္ဗူးHandgel တစ္ေယာက္ကိုတစ္ဗူးကFree ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္ဖူး နဲ႔အတူကုသိုလ္ယူေနာ္မူဆယ္ဆိုၿပီး “သူရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ပုံေလးေတြတင္ၿပီ သူမရဲ႕ ကတိတစ္ဝက္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post ရေကူးကန် ထဲမှာ အတွင်းသား တွေ ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီ ကျနေတဲ့ အယ်လာ ရဲ့ ဗီဒီယို
Next post ချစ်သူ က ဆံပင် အရှည်ထားမှကြိုက်တယ် ဆိုလို့ ဆံပင်အရှည်ထား နေရကြောင်းကို ချစ်စဖွယ် ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့ ချစ်သူ